Mobile｜WhatsApp｜Wechat :+8613801127507 , +8613955966088 Email:sales@yinrich.cominfo@yinrich.com
Yakaoma Candy Production Line
Chewy Candy Cheka Uye Putira Muchina
Yakawedzera Marshmallow Line
Auto-weighing System (aws)
Rapid Dissolving System (rds)
Batch-wise Vacuum Cooking Unit (bjc)
Inoenderera mberi Jelly/marshmallow Cooker(cjc)
Biscuit Kuzadza Machine
Sandwich Machine (cookie Capper)
Macaron Kuzadza Uye Capping Machine
Service After Sales& Warranty
Wako Wakavimbika Mubatsiri muCandy, Choco & Bakery Indasitiri
Iyo confectionery midziyo mutsara wekusangana wekugadzira zvihwitsi. Yinrich inyanzvi yekugadzira confectionery midziyo yekugadzira muChina, ine chokoreti yekugadzira muchina wekugadzira, yekushambadzira confectionery michina inotengeswa. Muchina wedu wekubikisa une hunyanzvi, wakashongedzerwa nemidziyo yekubikira yekubikira, confectionery kugadzira michina, confectionery yekurongedza midziyo, nezvimwe.
YINRICH's GDQ series yakagadzirwa zvakanyanya kugadzira masiwiti ejelly asina sitachi, anokwana kubva pa70kgs/h kusvika pa500kgs/h. Iyo HMI yekubata mapaneru kuitira nyore kushanda; Dosing pombi ye otomatiki jekiseni remavara, flavour uye acids; Maviri-mavara ane mitsetse, maviri mavara akaturikidzana, yepakati kuzadza, uye plain jelly candy inogona kugadzirwa pamutsetse uyu. Iyo servo-inotungamirwa kuisa inodzorwa nePLC chirongwa.
Iyo EM yakatevedzana muchina ndewekuti misa inonyudzwa neYINRICH's aerator, yobva yakamurwa kuita nzizi dzakawanda. Kunhuhwirira uye ruvara zvichabaiwa murukova rwega rwega. Ipapo iwe unogona kugadzira zvinoyevedza zvakasiyana siyana zvezvigadzirwa neYINRICH's yakakosha extruder, senge ruvara rumwechete, akasanganiswa mavara, 4 ruvara rwakamonyoroka, uye kunyange nepakati-yakazadzwa extruded chigadzirwa.
YINRICH's GDL series yakagadzirirwa kugadzira lollipops akaiswa, simba kubva pa120kgs/h kusvika pa500kgs/h. Iyo HMI yekubata mapaneru kuitira nyore kushanda; Dosing pombi ye otomatiki jekiseni remavara, flavour uye acids; Mitsetse ine mavara maviri , mavara maviri akaturikidzana, pakati pekuzadza, uye clear lollipop anogona kugadzirwa pamutsetse uyu. Iyo servo-inotungamirwa kuisa inodzorwa nePLC chirongwa. Automatic stick yekuisa system inowanikwa.
Sandwich muchina (Cookie Capper)
Vhidhiyo iyi muchina wesangweji (cookie capper) yakagadzirwa naYinrich, inova mutsara wekubatanidza cookie, muchina wesandwich cookie. Yinrich inyanzvimugadziri wezvigadzirwa zve confectionery. Panguva imwecheteyo, inopawo akasiyana sandwich muchina (cookie capper) uye cream biscuit michina yekugadzira makuki chirimwa.Iyi JXJ yakatevedzana sandwich muchina (cookie capper) inogona kubatanidzwa kune inoburitsa yekugadzira makuki chirimwa, uye inogona kurongeka, dhipoziti uye cap nekumhanyisa mazana matatu emakuki mitsara (150 mitsara yemasandwich) paminiti. Mhando dzakasiyana dzemabhisikiti akapfava uye akaoma, makeke anogona kugadziriswa nemuchina wesangweji (cookie capper). Iyo zvakare inogona kudyiswa kuburikidza nebhisikiti magazini feeder uye indexing system. Iyo sandwich cookie muchina wobva wabatanidza, unounganidza, unowiriranisa zvigadzirwa, unoisa huwandu hwakakwana hwekuzadza, uye wozovhara pamusoro pane zvigadzirwa. Iwo masangweji anobva atakurwa otomatiki kumuchina wekupetera, kana kumuchina wekuvharisa kuti uenderere mberi. Aya ndiwo magadzirirwo anoita sandwich muchina (cookie capper) mabhisikiti.Main Tekinoroji Madiro eiyo Cookie Assembly Line:Kukwanisa kugadzira: appro.14400 ~ 21600 masangweji/minYakatemerwa zvidimbu zvakabuda: 30 pcs / minKuisa misoro: 6 kusvika 8Cookie capping misoro: 6 kusvika 8Simba: 380V/12KWKureba kwebhandi: 800mmDimension: L:5800 xW: 1000 x H:1800mm
Kusvika pari zvino YINRICH yakabudirira kupa chocolate muchina, confectionery processing equipment, confectionery packaging equipment, uye mamwe marudzi emuchina weconfectionery kune vatengi vedu munyika dzinopfuura makumi matanhatu nematunhu epasi. YINRICH yakaisa uye yakapedza anopfuura mazana maviri emitsara yekugadzira uye confectionery michina, uye yakamisa yenguva refu yekudyidzana-ngarava nevatengi vedu. Tinotenda nemoyo wese pazasi vatinoshanda navo (hatigone kunyora zvese):
YINRICH® ndiyo inotungamira uye inyanzvi yekugadzira michina yekugadzira uye inotumira kunze kuChina nekupa iyo yemhando yepamusoro yekugadzira confectionery, muchina wekugadzira chokoreti uye kugadzira kubheka uye kurongedza michina, ine fekitori iri muShanghai, China. Semubatanidzwa wepamusoro-soro wechokoreti uye confectionery michina muChina.
YINRICH inogadzira uye inopa huwandu hwakakwana hwemidziyo yechokoreti uye confectionery indasitiri, kubva kumichina imwe chete kusvika kupedzisa turnkey mitsara, kwete chete yepamusoro yekutengesa confectionery michina nemitengo yemakwikwi, asi hupfumi uye hwakanyanya kushanda kweyese mhinduro nzira ye confectionery. uye kugadzira chokoreti.
Isu tinopa dhizaini, kugadzira, uye kusangana kwezvidiki uye zvepakati confectionery michina uye chokoreti kugadzira mitsara zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi.